VAOVAO TSARA HO FANTATRA - rov@higa
23 Août 2011, 22:51pm
Marc Ravalomanana Ho avy ary ho kandida filoham-pirenena
Nandritra ny hetsiky ny Vondron’Olontsotra tany Belo Tsiribihina sy Morondava ny faran’ny herinandro teo no nanamafisan’ny filoha Marc Ravalomanana an’izany, raha nanontany azy ireo vahoaka tonga maro tamin’ireo hetsika in-droa miantoana ireo.
Tao Belo Tsiribihina ny sabotsy 20 aogositra, nitohy tao Morondava ny alahady 21 aogositra. Sambany no nisy hetsika toy izao tao Belo raha fanindroany kosa ny tao Morondava ; midika io fa sahy mijoro ny olona amin’iny Faritra Menabe iny, na eo aza ny teritery sy ny fampihorohoroana ara-tsaina mihatra amin’izy ireo. Namela malalaka ny olona hilaza ny manahirana azy sy hanonantany izay zavatra manitikitika azy Atoa Marc Ravalomanana, raha niditra an-tariby nivantana avy atsy Afrika Atsimo, tamin’ireo fihaonana roa ireo. Ny tsy fandriampahalemana, ny fanaparam-pahefana, ny fitotongan’ny fihariana sy ny sosialy indrindra ny fahapotehan’ny fiainana ara-piarahamonina no tena mampitaraina ny Vahoaka tamin’ny alalan’ireo solontena nandray fitenenana. Nahavelom-bolo sy namelona fanantenana amin’izy ireo anefa ny teny nataon’ny filoha Marc Ravalomanana nanome toky fa “hiverina tsy ho ela eto an-tanindrazana ary manamafy fa mbola vonona ary hilatsaha hofidiana”.
Ho avy ao anatin'ny herinandro ny TROIKA (+vidéos)
Voasolotena avokoa ny mpandrindra TIM ao anatin'ny fokontany valo misy ao Andoharanofotsy nadritran'ny fitsidihan'ny mpandrindra foibe tao amin'izany kaomina izany. Nanome endrika vaovao ny fanohizana ny tolona ao anatin'izany kaomina Andoharanofotsy izany ny fihaonana androany satria nanavao ny hery entin'ny vahoaka miatrika ny famoretana misy eny an-toerana. Ao Andoharanofotsy tokoa no monina ny "Jeneraly" Alain Ramaroson izay malaza tena tompon'ny fampihotohotoana hatramin'ny 2009 no mankaty ary isan'ny nitondra takaitra noho ny asa ratsiny ny Ben'ny tanàna vofidim-bahoaka ao an-toerana.
Na izany aza noraisin'ireo parlemantera tonga tany an-toerana adidy ny mankahery ny mponina sy ny manome ny vaovao marina azy ireo. Nivoitra tamin'izany fa ho fanomanana ny fametrahana ny sori-dalana ivohana amin'ny krizy dia ho avy eto amintsika ao anatin'ny herinandro ny iraka avy amin'ny TROIKA hijery ifotony ny fomba hanatanterahana izany sady hanomana rahateo ny momba ny fiverenan'ireo sesitany rehetra.
TIM : hiakatra ny faritra 21 (+vidéo)
Fahombiazana tanteraka ny hetsika nokarakarain'ny rafitra Tiako I Madagasikara amin'ireo tanàna manodidina ny renivohitra. Na dia misy lesoka lehibe aza ny tsy fisian'ny hainoamanjery manohana ny tolona dia vitan'ny mpandrindra sy ny ekipany ny nampiakatra ireo mpikatroka teo amin'ny Kianjan'ny Finoana Magro Behoririka ny sabotsy 20 Aogositra teo ary efa nisy ny avy any Vakinankaratra no nanotrona izany fotoan-dehibe teto an-drenivohitra izany. Fanambin'ny depiote Ravelonanosy Mamitiana, mpandrindra ny TIM ivelan'Analamanga, ny hampiakatra ny mpitolona avy amin'ny Faritra 21 hafa eto an-drenivohitra mialohan'ny hitsenana ny Filoha RAVALOMANANA. Efa miasa ho amin'izany izy ireo amin'izao fotoana ary mifandray tsy tapaka amin'ireo rantsana any amin'ny Faritra amin'ny fanatontosana io hetsika goavana io.
Tompony fa tsy mpanaraka fotsiny (+vidéo)
Tsy tokony ny TIM indray no hisalasala amin'ny fitarihana ny tolona ho an'ny fiverenan'ny ara-dalàna. Hafatry ny birao politika ny tokony handraisan'ny tsirairay ny andraikitra manandrify azy mba handrosoan'izany tolona izany. Tsy tokony tahana ho an'ny antoko na ny ankolafy ny vaovao tsy marina aelin'ny FATE momba ny famahana ny krizy eto amintsika indrindra ny fiverenan'ny Filoha RAVALOMANANANA Marc. Ny filoham-pirenena dia efa manao izay tratrin'ny heriny amin'ny sehatra diplomatika noho izany anjaran'ny mpandala ny ara-dalàna rehetra no manao ny anjara manandrify eto an-tanindrazana.
Na dia efa talentany hatrizay aza dia tsipaka farany ataon'ny mpanongam-panjakana ny famafazana vaovao tsy marina manerana ny Nosy. Nitariny hatrany ivelany izany ary nampiasainy ireo masoivoho Malagasy teo aloha amina firenena sy vondrona iraisam-pirenena sasantsasany saingy tsy nahomby hatrany izany. Ny vaovao tena marina ary tsy miova sy eken'izao tontolo izao dia ny fahafahan'ny Filoham-pirenena RAVALOMANANANA mody an-tanindrazana miaraka amin'ireo rehetra nanao sesitany ny tenany noho ny raharaha politika teto amintsika.
Nampiaka-peo ireo Filoham-pokontany Manome “ultimatum” 48 ora
“Tsy hisy hisahana ny fikarakarana ny lisi-pifidianana izany eto raha tsy mivoaka ny namanay nogadraina noho ny resaka kabone.
Tsy hisy ny fanaterana lisi-pifidianana eny anivon’ny CIR raha tsy mivaha ny olana mianjady amin’io namanay io ary afahana madiodio amin’ny fanenjehana azy”. Izay no nataon’ireo Filoham-pokontany nivory tao amin’ny Lapan’ny Faritra Atsinanana, ny alahady tolakandro teo. Omaly alatsinainy rahateo no fe-potoana farany tokony hanaterana ity lisi-pifidianana ity eny anivon’ny CIR na foibe fandraketana amin’ny solosaina ny anaran’ny mpifidy handrafetana lisi-pifidianana. Vokany “nanome fe-potoana 48ora” nanomboka omaly alatsinainy hanafahana io filoham-pokontany io, ireto Filoham-pokontany 138 ao Toamasina ireto, tarihan’ny filohany Razafisoahanana Hery sy ireo mpiara-mitarika Atoa isany Razafindrabe Nirina, Besy Simon, Tsirahony ary Philémon.
Na izany aza dia nanamarika izy ireo fa mitohy ny asa maha Filoham-pokontany na eo aza izao hetsiky aton’izy ireo izao, saingy miato kosa ny fanomanana ny lisi-pifidianana sy ny fanaterana azy any amin’ny CIR. Ny volana oktobra 2010 no nitranga ity raharaha ity, ka nitarika amin’ny fitanana am-ponja ny Filoham-pokontany iray ao Valpinson. Fiompiana kisoa sy fanorenana kabone manakaiky ny tranona mpampianatry ny oniversite monina ao Valpinson no niavian’ny olana.
Nitondra ny raharaha teny amin’ny fitsarana ady madio ilay mpampianatra. Nivoaka ny didy manala avy hatrany ity fiompiana kisoa sy ilay trano fivoahana. Ilay fiompiana kisoa no nesorina avy hatrany, ilay trano fivoahana kosa nafindra toerana fotsiny. Ity farany anefa no nahatonga ny olana, na efa nahazoana fankatoavan’ny BMH sy efa nanaovan’ny vaditany fanamarinana aza ny famindrana azy. Nogadraina nanomboka ny 08 aogositra 2011 teo ilay Filoham-pokontany noho ilay kabone tsy nesorina fa nafindra fotsiny, nampangaina ho tsy nanaraka didim-pitsarana.
Nahazo LP izy nefa notoherin’ny fampanoavana ka izay no itazonana azy am-ponja vonjimaika na MD hatreto. Mahatsiaho ho maty hasina anefa ireo Filoham-pokontany ao Toamasina eo anatrehan’izany, nefa olom-boafidy fa tsy olom-boatendry akory, amin’izay mbola itontonan’ny asa rehetra koa. Nanamafy ny firaisankinany izy ireo ka ankoatra ity “ultimatum 48ora” ity, dia hanao rodobe eny amin’ny fitsarana koa izy ireo amin’ny 30 aogositra izao, andro voatondro hitsarana ilay Filoham-pokontany naman’izy ireo. Araka ny fantatra dia mpiara-miasa taloha teo anivon’ny oniversiten’i Toamasiana ny mpitory sy ny toriana amin’ity raharaha ity. Efa nisotro ronono efa ho roa taona teo anefa izao ilay MD ao Ambalatavoahangy. Ho hita eo ny ho tohiny !
Mantasoa Manamboninahitra ambony mivorivory
Manamboninahitra ambony maromaro no fantatra fa mivorivory any Mantasoa. Andro vitsivitsy lasa izay no nisy nahatsikaritra ireto andiana manamboninahitra ireto.
Tsy mbola fantatra hatreto izay anton’ity fivoriana ity saingy araka ny tsiliantsofina dia mety ho fikaroham-bahaolana manoloana izao krizy izao no anton’ny resaka. Ny lehiben’ny Etamazaoro jeneralin’ny Tafika, ny jeneraly ndriarijaona André moa efa nilaza fa misy ny fivoriana eo anivon’ny lehiben’ny miaramila ary hisy ny andraikitra am-pahamendrehana ho raisin’izy ireo. Misy idiran’izay resany izay ve ity fivoriana any Mantasoa ity ?
Toerana milamina rahateo any an-toerana ary azo hevrina fa mba tsy hisian’izay mety hahafantatra ny paikady raisin’ny miaramila no anton’ity fivoriana ity. Araka ny loharanom-baovao dia misy kolonely ary misy ny lietna kolonely amin’ireo mivory. Jeneraly be galona kosa no mitarika. Mpanao politika nitana andraikitra ambony teo aloha tamin’ny FAT kosa no voalaza fa nisy nahita ihany koa tany an-toerana.